Home Wararka Wasiiru-dowlihii Maaliyadda DFS oo laga xiray kursigii Xildhibaan ee uu raadinayay
[AKHRISO] Wasiiru-dowlihii Maaliyadda DFS oo laga xiray kursigii Xildhibaan ee uu raadinayay
Wasiiru-dowlaha Maaliyadda dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa laga xirtay kursigii Baarlamaanka Beeshiisa, kadib markii laga wareejiyay jufadiisa.
Wasiirka oo ka soo jeeda Beesha Cawlyahan Cali (Cali Saleebaan) ayaa warqad kasoo baxday Beeldaajaha beeshaasi Maxamed Beeldaaje Ismaaciil ayaa waxaa kursiga loo wareejiyay Jufada Biciidyahan Cali, taasoo ka dhigan inuusan isu sharxi karin Wasiir Maxamuud Xayir.
Qoral loo diray Madaxweynaha Puntland iyo Guddiga Doorashooyinka dadban ayaa lagu go’aamiyay in kursiga Hop#142 sanadkan loo xiro Beesha Biciidyahan Cali.
Kursigan waxaa horay ugu fadhiyey Wasiiru-dowlaha Maaliyadda dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim, waxaama soo afjarmay rajadiisii ahayd inuu dib ugu soo laabto kursiga.
Previous articleSomali security officers undergo intelligence training to secure elections
Next article[DAAWO] Doorashada kursiga Fahad Yaasiin oo la dalbaday in Muqdisho lagu qabto
Wasiir Sacad oo lagu eedeeyay Musuq-maasuq xoogan!
Kaltilismada Farmaajo oo si xirfadeysan u socota, iyo shacabka oo hurda